Vaovao - Inona avy ireo karazana sy tombony azo amin'ny vano counterbalance
Tongasoa eto amin'ny tranokalanay!
Manipulator mandeha ho azy
Rigid Arm Manipulator
Trolley finday manipulator
Seza fiarandalamby haingam-pandeha
Module hery ao amin'ny kabinetra
Toby fanamainana rano
Momba an'i Tongli
Inona avy ireo karazana sy ny tombony ny counterbalance vano
Mandanjana vanodia mety amin'ny asa fanaingoana lalana fohy any amin'ny toerana toy ny trano fanatobiana entana, seranan-tsambo fampirantiana fiara, sns. Ny toetrany dia mora ampiasaina, mora, fikojakojana tsotra, sns. Ny crane Balance dia azo zaraina ho karazana samihafa araka ny fomba fanasokajiana samihafa, jereo .
1. Voasokajy araka ny fomba fiasa: pneumatic counterbalance crane, hydraulic counterbalance crane, pedal counterbalance crane, sns.
2. Voasokajy amin'ny fomba fihetsehana: crane balance mobile sy crane balance portable.
3. Araka ny fifandanjana vano haavon'ny sy ny sakany tahan'ny: fohy fifandanjana vano sy avo fifandanjana vano, sns.
Balance craneamin'ny maha-karazana fitaovana fampiakarana fitaovana vaovao, dia be mpampiasa amin'ny asa injeniera mekanika maoderina izy io, mampiasa fomba fiasa miolikolika tsy manam-paharoa mba hampiakatra zavatra mavesatra, fa tsy ny asan'ny olombelona mba hampihenana ny hamafin'ny asa, dia fampiakarana mekanika kely sy antonony. fitaovana, dia marani-tsaina mampiasa ny efatra-rohy mekanika fitsipika, ny fampiasana ny boky sy ny maotera fiaraha-miasa tsotra sy ny fananganana ny fitambaran'ny hetsika mba hitondra zavatra manainga, mba hanandratra zavatra araka izay ilaina amin'ny fotoana rehetra mijanona maharitra amin'ny toerana rehetra ao amin'ny toeram-piasana. anatiny, atao amin'ny fifandanjana fihaonana.
Ny vano mampifandanja amin'ny fitaovana fanandratana dia noderaina betsaka, izany no antony?Izany dia tsy afa-misaraka amin'ny operability.
Balance vano dia tena ahitana tsanganana, lohany rafitra, sandry sy fifindran'ny ampahany, miaraka amin'ny rafitra mirindra sy tsara tarehy endrika.
Ny fandanjana vano miaraka amin'ny "fandanjan'ny herin'ny maizina" dia mahatonga ny hetsika ho malama, asa mamonjy asa, tsotra ary indrindra ampifanarahana amin'ny fikarakarana matetika, ny fivorian'ny fizotran'ny lahatsoratra, afaka mampihena be ny hamafin'ny asa, manatsara ny fahombiazany.
Ny crane counterbalance dia manana ny fiasan'ny fahatapahan'ny rivotra sy ny fiarovana amin'ny tsy mety miasa.Rehefa tapaka ny loharano famatsian-drivotra lehibe dia miasa ny fitaovana manidy tena mba tsy hianjera tampoka ny crane counterbalance.
Ny crane balancemahatonga ny fivoriambe ho mora sy haingana, marina ny fametrahana, ny fitaovana dia ao amin'ny habaka telo dimanjato mihantona ao anatin'ny kapoka voamarika, ary ny fitaovana dia azo ahodina miakatra sy midina, ankavia sy havanana amin'ny tanana.
Ny bokotra fanaraha-maso rehetra dia mifantoka amin'ny tànana fanaraha-maso, ary ny fampandehanana dia mitambatra amin'ny fitaovana fiasana amin'ny alàlan'ny fitaovana.Ka raha mbola manetsika ny tahony ianao, dia afaka mihetsika miaraka aminy ny fitaovana fiasana.
Fotoana fandefasana: Feb-16-2022
LALANA ANQUAN NO.17-2,JIANGYIN JIANGSU CHINA